Ghana Oo Qeybinta Tallaalka Covid-19 U Adeegsaneysa Diyaaradaha Aan...
ACCRA(Wararka Maanta)-Dowladda Ghana ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u adeegsanaysa in tallaalka Covid-19 uu gaaro dhammaan dacallada dalkaas.
Wasaaradda caafimaadka Ghana ayaa fududeynta howshan waxa ay iskaashi kala samaysay shirkadda Zipline eel aga leeyahay dalka Mareykanka taas oo ka shaqeysa kala tallaabinta dawooyinka. Waxay shirkaddani tallaalka Covid-19 si sahlan ku gaarsiin doontaa deegaannada dhaca miyiga fog ee Ghana.
Diyaaraha aan duuliyaha lahayn ee Zipline ayaa awood u leh in halkii marba ay socdaal ku marto 160 km oo sii socod iyo soo socod ah iyada oo duullimaad walbana uu qaadanayo ugu badnaan 55 daqiiqo.
Wararka Maanta : Digniin laga soo saaray xaalada ka taagan Gobolka Tigreega - Wararka Maanta:...
Shirkaddan ayaa kala tallaabisay 25,000 oo dhicood oo tallaalka Covid-19 ah oo ay gaadhsiisay 800 oo xarumood kuwaas oo ku yaalla deegaannada fog ee dalka Ghana.
Wasaaradda caafimaadka Ghana ayaa shegtay in adeegga diyaaradahan ay uga baaqsadeen culeysyadii ay kala kulmi jireen markii ay adeegsan jireen gadiidka dhulka waxa ayna tilmaantay in si xirfad iyo farsamo hufani ku dheehantahay ay adeegyada caafimaad u gaaraan halkii loogu talagalay.
Shirkadda bixisa adeegga duullimaadyada ee Zipline ayaa sheegtay in ay haatan qorsheynayso in ay dhawaan ka howlgasho dalka Nayjeeriya.
Ghana ayaa heshay 1.23 milyan oo dhibcood oo tallaaka Covid-19 ah iyada oo tallaashay dad tiradooda lagu sheegay 376.000 oo qof.
Related Topics:aanadeegsaneysaCOVID19DiyaaradahaGhanahorufadhi media wararka maantaogaden24 net category wararkaQeybintaradiomuqdisho wararkaTallaalka
In ka badan 30 Ruux oo ku dhimatay Shil tareen – Wararka Maanta: Somali News…
Madaxweyne Deni: Doorashooyinkii ururada siyaasada iyadoo aan la gaarin…
Tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee UK oo korortay – Wararka Maanta: Somali…
Weerar dad lagu dilay oo ka dhacay Itoobiya – Wararka Maanta: Somali…
Madaxda Itoobiya ayaa ku eedeeyey dagaal yahanada la mamnuucay ee OLA weerarka lagu diley sagaal qof daafaha magaalada caasimadda ee Addis Ababa.
Dadka la diley ayaa waxaa kamid ahaa shaqaalaha dhismaha buundada degmada Metta Wolkitte, oo 100km u jirta caasimadda, sida uu u sheegay BBC-da madaxa degmada Dirirsa Wakuma.
Wuxuu intaa ku darey mas’uulkani in dadka la diley uu kamid ahaa ruux cabitaanka bunka ah ku iibinayey wadada hareeraheedda.
Dagaal yahanada ayaa u sheegay shaqaalaha dhismaha buundada iney joojiyaan, laakiin way sii wadeen shaqada, maadaama uu ka baqayey inuu waayo shaqadiisa, sidaasi waxaa sheegay mid kamid ah qaraabada dhibanayaasha.
Wararka Maanta : Madaxweyne Deni: Doorashooyinkii ururada siyaasada iyadoo aan la gaarin...
Dhacdooyinkan oo kale maaha kuwo ku cusub ciidamada dowladda federaalka Itoobiya, maadaama uu wali socdo dagaalka ay kula jiraan kooxaha ka dagaalamaya galbeedka iyo koonfurta gobolka Oromada.
Saraakiisha ayaa sheegay in kastoo ay jiraan walaac la qabo oo ku saabsan ammaanka, haddana inaaney saameyneyn doorashada guud ee dhaceysa maanta oo Isniin ah.
Booliska Nigeria oo dilay 14 Nin oo hubeysnaa – Wararka Maanta: Somali…
Qaxooti horleh oo soo gaaray degaannada Puntland – Wararka Maanta:…
Waxaa xalay magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari soo gaaray oo lagu soo dhaweeyay Qaxooti Yemeniyiin ah, oo ay weheliyaan dad Soomaaliyeed, kuwaas oo ka soo cararay colaadda ka aloosan dalka Yemen.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo soo dhaweeysay Qaxootiga ayaa War kasoo baxay waxaa lagu sheegay in Qaxootgaan badankood ay yihiin Yemeniyiin, balse ay la socdaan dad Soomaali ah.
Sidoo kale Wasaaradda waxaa ay sheegtay in Qaxootigan ay gaarayaan ilaa 80 Qoys, kuwaas oo u badan Carruur iyo Haween,isla markaana Markab kasoo qaaday dalka Yemen lagu keenay dekadda magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari.
Dhowr jeer ayaa magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari waxaa kasoo degay Qaxooti Yemeniyiin ah, kuwaas oo kasoo cararay colaada ka aloosan Magaaloyin ka tirsan dalkaas.
Previous articleDoorashada Guud ee Itoobiya oo saaka bilaabatay
Warka Ciyaaraha20 mins ago
Caalamka Videos26 mins ago